Zava-dehibe ny famolavolana rehefa mamorona App | Famoronana an-tserasera
Volavola ho an'ny varotra fampiharana finday
Jorge Neira | | Graphic Design, lohahevitra
Al amboary ny pejin-tranonkalanao ho an'ny vokatra tsirairay ao amin'ny fampiharana varotrao antsinjarany, mila mahazo antoka ianao atolory ny mpanjifanao izay tiany ho fantatra raha ny vaovao voaray.
Amazon dia iray amin'ireo pejy manome ohatra mazava momba ny ny fomba ahafahanao mandresy ny fahasahiranan'ilay efijery efijery kely tarihin'ny fampahalalana: nisafidy tsotra izy mamolavola pejy web horonan-taratasy lava amin'ny rindranasao ahafahanao mandefa ny mpanjifa mety hidina any amin'izay azony idirana amin'ny fampahalalana rehetra ilainy isaky ny pejy.
1 Fantaro ny endrika tsara indrindra amin'ny varotra fampiharana
2 Izany no antony anoloranay safidy telo hafa anao:
2.1 Avelao ny mpampiasa hitantana ny kalesiny
2.2 Ataovy mora ny mahita fampahalalana momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa
2.3 Hafa ny fampiharana antsinjarany
Fantaro ny endrika tsara indrindra amin'ny varotra fampiharana
Ity karazana pejy horonana lava ity manana ny fanolorana ireto antsipiriany manaraka ireto momba ny vokatra:
sary maranitra sy avo lenta.
Fampahalalana sy habe amin'ny loko.
Fampahalalana momba ny fandrisihana, izany hoe fiverenana maimaimpoana.
Lisitry ny fiasa voafaritra.
Lahatsoratra mifandraika amin'ny vokatra sy tolo-kevitra.
Fanontaniana sy hevitra avy amin'ireo mpampiasa.
Ity iray ity fampahalalana ho ampahany amin'ny fampiharana antsinjarany, raha ny marina dia manampy amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa.
Amporisiho ny fangatahana fisoratana anarana
Rehefa angatahina hisoratra anarana mialoha ny mpanjifa, misy atahorana ny fanapaha-kevitr'izy ireo hiala izao dia izao.
Na izany aza ary amin'ny telefaona finday, ny traikefa amin'ny fampiharana antsinjarany manolotra fananana aseho izay kely kokoa noho izany, noho izany ny fisoratana anarana dia manahirana lehibe kokoa, izany no antony raha tsy maintsy mangataka ny mpanjifa hisoratra anarana ianao, tsy maintsy afaka manolotra zavatra sarobidy be ianao hanehoana fa mendrika ny korontana.
Fantatra amin'ny hoe rindrina fidirana, izay ahafahan'ny mpanjifa misoratra anarana hahafahany manohy mandroso ny fampiharana, dia matetika no mahatonga azy ireo ho kivy.
Izany no antony anoloranay safidy telo hafa anao:
Ampiasao ny fitsipiky ny fifamaliana mba hanomezana ny mpanjifa antony ambony sarobidy.
Mampiasà fidirana sosialy.
Avelao ny mpanjifa hampiasa endri-javatra fizahana sasany, izay tsy mandany fotoana misoratra anarana.
Raha mahita ny tenanao ianao famolavolana fampiharana ho an'ny marika izay tsy dia misy fanekena firy, ilaina ny tombony omenao an'ireo mpanjifa misoratra anarana dia somary avo kokoa noho ny mahazatra.
Avelao ny mpampiasa hitantana ny kalesiny
Ny UX tsara dia manondro omeo fanaraha-maso feno ny mpanjifanao ny saretiny. Araka ny torohevitra vitsivitsy avy amin'ny Google ho an'ny fisoratana anarana antsinjarany dia asaina mamela manana fahalalahana hanova ny mpampiasa ny saretinao na aiza na aiza misy azy ireo amin'ny fivezivezena.
Izany no antony anoloranay hevitra an'izany fivezivezena miantsena famolavolana, azonao antoka fa afaka manova ny isan'ny lahatsoratra nofidinao ny mpanjifanao na rahoviana na rahoviana no te hanao izany.
Ataovy mora ny mahita fampahalalana momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Amin'ny antsinjarany finday, ny Good UX dia mamela ny serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara.
Ny iray amin'ireo singa lehibe amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia ny alao antoka fa manana fahaizana mijery Internet ny mpanjifa, ny fampahalalana momba ny fifandraisana izay misy momba ilay mpivarotra, satria azo antoka fa hanana fanontaniana na fanehoan-kevitra sasany izay tian'izy ireo halefa aminao amin'ny mailaka na an-tariby.
Hafa ny fampiharana antsinjarany
Maromaro amin'ireo Ny fomba voatondro dia mihatra amin'ny biraoAmin'ny ankapobeny, ny fahazoana antoka fa ny mombamomba ny fifandraisana rehetra dia misy hatrany amin'ny mpanjifa. Na izany aza, ny hafa toa ny fampiasana ny pejy horonan-taratasy, mety ho counter-intuitive amin'ny finday, noho ny efijery kely kokoa sy ny ilàna pejy haingana kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Volavola ho an'ny varotra fampiharana finday
Juan | sary famantarana ny tranonkala dia hoy izy:
Tapitra ve ny tranokalanao? Oviana ianao no nanavao ny atiny farany tamin'ny tranokalanao? Alohan'ny hanombohana? Raha izany dia izao no fotoana hanarian-drano ny atiny taloha sy efa tsy maharitra ary soloina vaovao vaovao sy vaovao.
Misy pejy maro izay mivarotra vokatra, izay tohanan'ny sehatra ecommerce, ary mazava ho azy fa mamaly ihany koa izy ireo (ampifanarahana amin'ny fitaovana finday).
Mirary soa amin'ny varotrao!
Mamaly an'i Juan | sary famantarana ny tranonkala
Ireo no safidy tsara indrindra maimaim-poana amin'ny Adobe Illustrator amin'ity taona ity
Maninona ny evolisiona no tsara kokoa noho ny revolisiona amin'ny famolavolana vokatra